‘बेरोजगार हुनुहुन्छ ! चिन्ता नगर्नुस्’ « Lokpath
काठमाडौँ-के तपाईं कुनै पनि रोजगारीको अवसर नपाएर हैरान हुनुहुन्छ ? अब चिन्ता नगर्नुस्, सरकारले तपाईंको योग्यता, सीपअनुसारको रोजगार उपलब्ध गराउने छ । यदि रोजगार उपलब्ध नभए ‘निर्वाह भत्ता’ दिनेछ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको ‘रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’मा सरकारले बेरोजगार नागरिकलाई एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १०० दिनको रोजगारीको सुनिश्चितता गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: २०७५,भाद्र,५,मंगलवार १६:०९
इजरायलका लागि केयरगिभरमा जानेहरूको भाषा परीक्षाको नतिजा प्रकाशित
काठमाडौं । इजरायलका लागि केयरगिभरमा जानेहरूका लागि लिइएको अंग्रेजी भाषा परीक्षाको नतिजा मंगलबार(आज) प्रकाशित भएको छ । सात हजार नौ
विकराल बन्दै बेरोजगारको समस्या : सरकार खोइ रोजगारी ?
सरकारले आम नेपालीलाई रोजगार दिने प्रतिबद्धता गरे पनि अझै पनि हजारौँ युवाहरु बेरोजगार छन् । सरकारले प्रशस्त मात्रामा रोजगारीको सिर्जना
इजरायल रोजगारी : आवेदन दिएकाहरुको लिखित परीक्षा तय
काठमाडौ । इजरायल रोजगारीमा जान आवेदन दिएका इच्छुक कामदारहरुको लिखित परीक्षाको मिति तय भएको छ । परीक्षा भौतिक उपस्थितिमै हुने
छैन रोजगारी, युवाहरूको बढ्दो विदेश पलायनले उब्जाएको अनुत्तरित प्रश्न
बेरोजगारी यस्तो समस्या हो, जसले शारीरिक मात्र हैन मानसिक समस्या समेत सिर्जना गर्छ । सोच्नुहोस् त नेपालमा बेरोजगारको परिभाषामा पर्ने